Ugbu a nke B2B Ahịa akpaaka | Martech Zone
Ego ha nwetara maka B2B ahịa akpaaka usoro rịrị 60% na $ 1.2 Billion na 2014, ma e jiri ya tụnyere mmụba 50% n'afọ gara aga. N'ime afọ 5 gara aga, ụlọ ọrụ ahụ etopụtala okpukpu iri na otu ka ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-aba uru na atụmatụ ndị isi ahịa akpaaka ga-enye.
Ka ụlọ ọrụ ahụ na-eto n'ike n'ike, ndị Ntọala nke nnukwu akpaaka ahịa ikpo okwu na-mma nke ukwuu kwetara na na omume kacha mma maka ahia akpaaka mmejuputa iwu gaa n'ihu na-ewusi ike.
Ihe omuma a sitere na Uberflip, Mgbanwe akpaaka nke Ahịa, na-enye nnukwu foto nke ọnọdụ B2B Marketing Automation ụlọ ọrụ ugbu a.
Top 5 Uru nke B2B Marketing akpaaka
Ọgbọ ndị ọgbọ abawanye
Olileanya ka mma ma duzie nghọta
Dịkwuo na arụmọrụ
Nleba anya dị elu, usoro nurturt na nkesa
Mma ndu ndu
Naanị 8% nke ndị ahịa B2B tozuru etozu kwuru na mbọ akpaaka ahịa ha adịghị arụ ọrụ - ọ ga-amasị m ịkọ na nke a abụghị n'ihi azịza ya, kama n'ihi mmejuputa ya. Ihe ndị a bụ usoro dị mgbagwoju anya nke nwere ọtụtụ akụkụ na-agagharị na-achọ atụmatụ dị ukwuu na ọdịnaya iji chụpụ ha. Echere m na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na nsonaazụ ahịa nke nyiwe na-akwalite ma ghara ilekwasị anya na akụ na oge ọ were iji ruo ebe ahụ.
Tags: Ntọala 2015akpaaka b2b ahiab2b ahịa akpaaka urub2b ahia akpaaka irèinfographicakụrụngwa ahịainfographic ahịa akpaakaọnụ ọgụgụstatsuberflipozi uberflip
Etu esi eji nchịkọta Google emeziwanye Mgbalị ahịa gị